Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment डाक्टर केसी र सरकारी पक्षको वार्ता निष्कर्षमा पुगेन - Pnpkhabar.com
डाक्टर केसी र सरकारी पक्षको वार्ता निष्कर्षमा पुगेन
काठमाडौं, असोज २२ : सरकारी पक्ष र वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। शिक्षा सचिव गोपी मैनालीसहितको टोलीसँग केसी पक्ष बुधबार साँझ शिक्षा मन्त्रालयमा वार्तामा बसेको थियो। तर, केही गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्ष वार्तास्थलबाट बाहिरिएका छन्।
वार्ता जारी नै रहेको केसी पक्षले बताएको छ। पुन: वार्ता बिहीबार राति वा शुक्रबार बिहान बस्ने केसी पक्षबाट वार्ता टोलीमा सहभागी भएका सदस्यले बताएका छन्। ‘वार्ता सकारात्मक भए पनि केही गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले हामी पुन: बस्नेछौं,’ केसी पक्षबाट वार्तामा बसेका डा. जीवन क्षेत्रीले भने, ‘दुवै पक्ष सकारात्मक नतिजा निकाल्न प्रयासरत् छ।’
डा. केसी विगत २४ दिनदेखि अनसनरत् छन्। उनले विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर सत्याग्रह थालेका थिए। दुवै पक्षले कुन बुँदामा सहमति हुन नसकेकोबारे बताएका छैनन्। केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै जाँदा सरकारले बुधबार टोली गठन गरेको थियो।